आमा नरुनु है , म जित्ने छु : के.सी
डाक्टर गोबिन्द के.सी की आमा खुशी छिन्, छोराले अरुको लागि गरेको त्यागको लागि। उनी छोराको अनशनलाई तपस्या मान्छिन्। आमा आशा गर्छिन्, माग चाँडै सम्बोधन हुन्छ भन्ने। १४ दिन भइसक्यो छोरो भोकै छ भन्ने सम्झँदा आफूले सानो हुँदा त्यही छोरोलाई ख्वाएको सम्झिन्छिन् उनी।
आमालाई लाग्छ राम्रो काम गर्नेको जित हुन्छ। निकै भावुक भएर उनले भनिन्, ’मेरो जेठो छोरोले पनि जित्छ। आफ्नो लागि मात्र होइन, सबैको लागि। सबै बिरामीको लागि। मेरो छोरो जस्तै डाक्टर बन्ने सपना देखेकाको लागि।’
डा. केसीले पनि ‘मलाई केही हुँदैन, हजुर नरुनु है’ भनेर आमालाई धेरै पटक सम्झाइसकेका थिए। ‍उनलाई छोरा भेट्न जान मन लाग्छ। तर फेरि छोराकै मन पोल्ला भन्ने डरले जान सक्दिनन्।
‘छलछाम नगरन डा. गोविन्द केसीको चेतावानी
धुरुधुरु रोए डा. गोविन्द केसी !
पहिलो समाचारओलीका १२ गल्ति : प्रचण्ड अर्को समाचारओलीको टार्गेट राजतन्त्र : प्रचण्ड
जानी राखौँ : अनार खानुका यस्ता १० फाईदाहरु
भान्सामा पाक्ने बन्दाकोबी तरकारीले लिनसक्छ ज्यान
आँप खाऔं यौंन क्षमता बढाउ र स्तन क्यान्सरबाट बचौं